ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (ရန်ကုန်) ရှိ ဗိုလ်ချုပ်ပုံတူ ဆီလီကွန်ရုပ်တု သန့်ရှင်းရေးပြုလု?? - Yangon Media Group
အာဇာနည် နေ့နီးပြီဖြစ်၍ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက် (ရန်ကုန်) ရှိ ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းပုံတူ ဆီလီကွန်ရုပ်တုအား ကိုယ်တိုင်သန့်ရှင်းရေးလုပ် ဆောင်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆီလီကွန်ပုံ တူပန်းပုပညာရှင် ဦးအောင်ကျော်ထွန်းက ပြောသည်။ ပြတိုက်တွင်ပြသထားသော ဗိုလ်ချုပ်ပုံတူ ဆီလီကွန်ရုပ်တုကို အာဇာနည်နေ့ ဇူလိုင် ၁၉ ရက် မတိုင်မီ ဇူလိုင် ၁၂ ရက်တွင် သန့်ရှင်းရေးများလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
”အာဇာနည်နေ့နီးပြီဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်တုကို လူလိုပဲရေချိုး ပေးတယ်။ ဆပ်ပြာတိုက်ပေးတယ်။ သန့်ရှင်းရေးတွေလုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ ပုဆိုးအသစ်၊ အင်္ကျီအသစ်တွေ လဲပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးဆိုတော့ ဖုန်တွေတက် နေတာလည်းရှိမှာပေါ့။ သန့်ရှင်း ရေးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံတူ ဆီလီကွန်ရုပ်တုကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နတ်မောက်မြို့ ဗိုလ်ချုပ်နေအိမ်ပြတိုက်အတွက် ပုံတူရုပ်တုတစ်ခု၊ ရန်ကုန်နေအိမ် ပြတိုက်အတွက် ပုံတူရုပ်တုတစ်ခု ထုလုပ်ခဲ့ ကြောင်းနှင့် အာဇာနည်နေ့ကို မ မေ့အပ်ကြောင်းသိရသည်။
”ဗိုလ်ချုပ်ဆီလီကွန်ပုံတူရုပ်တုကတော့ နတ်မောက်နှစ် (၁ဝဝ) ပြည့်ပွဲမှာတစ်ခု၊ နောက်သာသနာ ရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကလုပ်ခိုင်းလို့ ရန်ကုန်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်အတွက်တစ်ခု၊ နှစ်ခုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အာဇာနည်နေ့နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ အာဇာနည် နေ့ဆိုတာ မမေ့အပ်တဲ့ နေ့တစ်နေ့ ပဲ။ တစ်ချိန်တုန်းကတော့ နည်းနည်းလေးမေ့အောင်လုပ်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ အသက်ပေးခဲ့တဲ့ နေ့တစ်နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းပြည်ရဲ့ အမှတ် တရနေ့တစ်နေ့ဖြစ်တယ်။ မေ့ ပျောက်ရမယ့်နေ့မျိုးမဟုတ်ဘူး။ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေကို သတိရရှိပြီးသူတို့ဖြစ်စေချင်တဲ့ မျှတတဲ့ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းကိုသွားကြဖို့လိုပါတယ်”ဟု ဆီလီကွန်ပုံတူပန်းပုပညာရှင် ဦးအောင် ကျော်ထွန်းကပြောသည်။
ဆီလီကွန်ပုံတူ ပန်းပုပညာရှင် ဦးအောင်ကျော်ထွန်းသည် ညောင်လေးပင်ဇာတိဖြစ်ပြီး မော်လမြိုင်တက္ကသိုလ်မှ ဓာတုဗေဒ ဖြင့် ဘွဲ့ရရှိခဲ့သူတစ်ဦးဖြစ်သလို အမျိုးသားယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုပညာတက္ကသိုလ်တွင် ပန်းပုမေဂျာ ဖြင့် ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာရရှိခဲ့သူတစ် ဦးဖြစ်ကာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကဲ့သို့ အထင်ကရခေါင်းဆောင်များ၏ ပုံတူဆီလီကွန်ရုပ်တုများ၊ ဆရာ တော်ဘုရားများ၏ ပုံတူဆီလီကွန် ရုပ်တုများကို ထုလုပ်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
စည်းကမ်းမဲ့ အမှိုက်တည်နေရာများကို မှတ်သားနိုင်မည့် အမှိုက်ပြမြေပုံ အက်ပလီကေးရှင်းကို စတင် အ
ရုံတင်ပြသရန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ၃ဝဝ ကျော် တန်းစီ စောင့်ဆိုင်းနေပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး ရိုက??
သင်္ကြန် အကြိုကာလမှ စတင်၍ မြဝတီမြို့ ၌ တပ်မတော်၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၊ နယ်ခြားစောင့်တပ်နှင့် ငြိမ်းချမ်?
နိုင်ငံ့စီးပွားရေး တိုးတက်မည်ဆိုပါက ကုန်ဈေးနှုန်း ကျဆင်းနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သီးခြားစီမံချက??